Daawo Video: Al Shabaab Oo Hadashay Khariiraddii Dowladda Itoobiya ku Muujisay Gumeysigeeda Soomaaliya iyo Boobka lagu hayo kheyraadka dalka.
Wednesday June 05, 2019 - 11:12:52 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Hoggaanka Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa ka hadlay tallaabooyinkii ay dowladda Itoobiya qaadday ee ay ku xaqiijisay in ay qabsatay Soomaaliya.
Sheekh Cali Dheere oo ah Afhayeenka Xarakada Al Shabaab ayaa sheegay in Khariiraddii ay wasaaradda arrimaha dibadda dowladda Itoobiya ku muujisay in Soomaaliya ay ku darsatay dalkeeda uu ahaa caddaysasho ay Itoobiya caddeysteen damacooda fog ee ay ku doonayaan in ay ku qabsadaan dalka.
Wuxuu sheegay in Gummeysiga Itoobiya uu ku adeeganayo Hoggaanka dowladda Federaalka oo dabadhilifnimadu ku fogaatay islamarkaana gacan geliyay dhulka Soomaaliyeed.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sidoo kale soo hadal qaaday boobka ay shisheeyuhu ku hayaan kheyraadka dadka Soomaaliyeed, isagoo si gaar ah farta ugu fiiqay heshiiskii ka dhacay London ee lagu iibiyey shidaalka Soomaaliya, iyo go’aankii uu baarlamaanka ku ansixiyey qorshahaasi.
Qeybaha dambe ee kalimada, Sheekh Cali Dheere ayaa fariimo muhiim ah u diray dadka Soomaaliyeed ee Muslimka ah kuwaas oo uu ugu baaqay inay u dareeraan jihaadka wadada Allaah, ayna la dagaalamaan cadowga saliibiga ah ee guranaya kheyraadkooda iyo hantidooda, waxaana uu tibaaxay in Mujaahidiinta dhankooda ay sii wadi doonaan dagaalka ka dhanka ah gumeystaha iyo dabadhilifyadiisa, islamarkaana aysan u aabayeelin doonin cagajugleynta iyo handadaada cadowga Allaah.
Halkan ka degso Video-ga Kalimadda Sheekh Cali Dheere.
ama halkan si toos ah uga daawo
Halkan ka doono Linkiyo badan oo aad ka degsan kartid Filimka
Kalimadda oo cod ah waxaad ku dhageysan kartaa Youtube
Midowga Yurub oo walaac ka muujiyay dagaal ka dhax qarxa dowladda Federaalka iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah.